Baarlamaanka Somalia oo Ansixiyay Miisaaniyaddii Muranku ka taagnaa ee Xukuumuddu soo gudbisay, Sababta ogoow,? – Hornafrik Media Network
Baarlamaanka Somalia oo Ansixiyay Miisaaniyaddii Muranku ka taagnaa ee Xukuumuddu soo gudbisay, Sababta ogoow,?
By HornAfrik	 On Aug 6, 2017
Baarlamaanka Somalia ayaa Maanta Cod aqlabiyad leh ku ansixiyay Miisaaniyaddii ay soo gudbisay Wasaaradda Maaliyadda ee Xukuumadda Somalia oo muran badan ka taagnaa. Waxaana oggolaaday Miisaaniyadda 167 Xildhibaan, Halka 2 Xildhibaana ay diideen, mana jirin Cid ka aamustay.
Guddoonka Baarlamaanka ayaa codaynta kadib ku dhawaaqay in Miisaaniyadda ay ansax tahay si waafaqsan Shuruucda Dalka maadaama ay Xildhibaanaddu si aqlabiyad leh ku oggolaadeen.
Aaway Murankii ka taagnaa Miisaaniyadda.
Miisaaniyaddan ay Maanta meel mariyeen Baarlamaanku ayaa waxaa buuq badan kala hor yimid Xildhibaanadda, Waxayna Doodda Mudanayaasha Baarlamaanku ay qalqal ku abuurtay Wasaaradda Maaliyadda oo soo gudbisay Miisaaniyadan, Laakin ugu dambayn 24-kii Saac ee la soo dhaafay ayeey Xafiiska Raiisul Wasaaruha iyo Madaxtooyo ku bixiiyeen lacag ku dhow 1 Milyan oo Doolar in Miisaaniyadda la meel mariyo, Waxaana la arkayay Xalay Saraakiil ka tirsan Labadaasi Xafiis oo olole xooggan oo ay la socdaan Baqshado ka dhex wada Hoteeladda Muqdisho.
Xafiiska Madaxwaynaha iyo Xafiiska Raiisul Wasaaraha ayaa u muuqda inay la qabsadeen Waaqiciga dhabta ah ee Baarlamaanka Somalia, iyagoo meesha ka saaray Hadaladoodii ahaa inay la dagaalamayaan Musuq Maasuqa, Waxayna billaabeen inay Qasnadda Dawladda u furaan in laga bixiyo Laaluush.
Xog: Ciidamo Itoobiyaan oo weerar ku ah mid ka mida Fariisimadda Alshabaab.
Gudoomiyaha Guddiga Dastuurka Labada Aqal ee Somalia oo la doortay.